Clicky WordPress Plugin na Admin wepụtara | Martech Zone
Clicky bụ ezigbo ụtọ nchịkọta ngwa nke na - eme ka uche dịịrị onye ọrụ karịa nke ụmụ okorobịa ọ bụla nọ ebe ahụ. Echere m na obere ahịa bụ nnukwu niche na Clicky kwesịrị ịnwe ya n'oge na - adịghị anya ezigbo interface, nnukwu ndịna, na ozi ọ na-egosipụta bụ zuru okè n'ihi na nkezi blogger.
N'oge na-adịghị anya, Clicky wepụtara WordPress ngwa mgbakwunye ka embed Clicky n'ime WordPress. Sean dere na Goodie Page ya na ọ maghị oke banyere WordPress ma ọ ga-enwe mmasị ịmebe ibe iji nyefee ngwa ahụ site na interface WordPress Admin, mana ọ maghị etu ahụ. Obi dị m ezigbo ụtọ na ọrụ a rụrịrịrịrị na Clicky ka m wee nye ha akara iji hụ ma m ga - enyere aka. Azịza ya bụ 'n'aka'!
N'ime awa ole na ole na ngwụsị izu ahụ, m wuru ọmarịcha nchịkwa nchịkwa nke nwere atụmatụ niile dị mkpa. Sean doziri ya ma mezie ya (nke ọma) karịa na Clicky ma nwee weputara ya taa! Ọ bụghị mgbe ị na - enweta ohere iji nyere aka dịka otu a - mana m ga - achọ ịhụ ngwa dịka Clicky na - anabata isi. Nke ahụ bụ ihe mmeghe na-emeghe maka mmekorita, ọ bụghị ya?!
Were onwe gi Nchịkọta Weebụ Pịa akaụntụ wee budata ya Clicky WordPress ngwa mgbakwunye.
Ckpụ ntutu na Nzuzo, Mgbapu ma ọ bụ Ahụmịhe Onye Ọrụ?
Enwere m nsogbu ole na ole na ntụkwasị obi na getclicky ọnwa ole na ole gara aga mana ọ dị ka ha edozila ihe a niile wee laghachi na iji ya. N'ezie m debara aha ha maka 'blog' ngwugwu nke $ 19 kwa afọ na-enye gị nkọwa zuru ezu maka blọọgụ 3 nke m chere na ọ bụ ọnụ ahịa.
M ga-anwale na ngwa mgbakwunye.
Jun 15, 2007 na 1:56 AM
Ọrụ ọzọ dị ukwuu Doug. You're na-a bit nke a pro ugbu a na WordPress plugins 🙂